January 21, 2022 खबर समृद्धLeaveaComment on गुल्मीको बिरबासमा मौरिको मह बिक्री गर्ने निहुँ पारी एकजना अपरिचित ब्यक्ति देखा परेको छ ।
Breaking News: गुल्मीको बिरबासमा मौरिको मह बिक्री गर्ने निहुँ पारी एकजना अपरिचित ब्यक्ति देखा परेको छ । झट्ट हेर्दा कालो वर्णको ,शारीरिक रुपमा अशक्त र लामा लामा कान भएको त्यो ब्यक्तिको स्थायी ठेगाना कहाँ हो भन्ने कुरा खुलस्त छैन।उनिहरु जुनसुकै बेला पनि तपाईंको घरदैलोमा आउन सक्छन। उनिहरुले विशेष गरि साना-साना बच्चालाई आफ्नो सिकार बनाउने , […]
हल्दिबारी । झापामा पहिलो पटक हल्दिबारी गाउँपालिका वडा नं. १ ले लकडाउनको घोषणा गरेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको तेस्रो लहर शुरु भएपछि जिल्लामा हल्दिवारी १ बाहेकले लकडाउन गरेका छैनन् । संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न आजदेखि लागु हुने गरि अनिश्चितकालिन लकडाउन गरेको वडाध्यक्ष त्रिलोचन सापकोटाले जानकारी दिए । हल्दिबारी गाउँपालिका वडा नं. १ अन्तरगत कोरोना […]
सम्पूर्ण गुल्मीबासिमा अनुरोध
January 20, 2022 खबर समृद्धLeaveaComment on सम्पूर्ण गुल्मीबासिमा अनुरोध
सम्पूर्ण गुल्मीबासिमा अनुरोध : गुल्मिको बिरबासमा मौरिको मह बिक्री गर्ने निहुँ पारी आएको एकजना अपरिचित ब्यक्ति देखा परेको छ ।झट्ट हेर्दा कालो वर्णको ,शारीरिक रुपमा अशक्त र लामा लामा कान भएको त्यो ब्यक्तिको स्थायी ठेगाना कहाँ हो भन्ने कुरा खुलस्त छैन। त्यो ब्यक्ति त्यहि गाउँमै लुकेर बसेको आशंका गरि उसलाई खोजी गर्ने कार्य भैरहेको कुरा […]
January 19, 2022 खबर समृद्धLeaveaComment on फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य
फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य. काठमाडौं, माघ ५ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ । निगमले बुधबार (आज) राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो । निगमकाअनुसार पेट्रोलको मूल्य ३ रुपैयाँले बढेर १३९ रुपैयाँ पुगेको छ । डिजेल र मट्टीतेलमा पनि ३–३ रुपैयाँ बढेर १२२ रुपैयाँ पुगेको […]
January 19, 2022 January 19, 2022 खबर समृद्धLeaveaComment on नेपाली कामदार इजरायलका लागि उड्दै, दोस्रो चरणमा तपाईको पालो हेर्नुहोस्।
काठमाण्डाै – रोजगारीका लागि ९९ जना नेपाली कामदार आज इजरायल उड्ने भएका छन् । उनीहरु आज राति ११ बजे इजरायलका लागि उड्ने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । आज ६३ महिला र ३६ पुरुष गरी ९९ जना नेपाली कामदार इजरायल जान लागेका विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भूसालले जानकारी दिनुभयो । इजरायल जाने कामदारका […]
मापदण्ड पालना गरेर विद्यालय खोल्न अनुमति
January 19, 2022 खबर समृद्धLeaveaComment on मापदण्ड पालना गरेर विद्यालय खोल्न अनुमति
महोत्तरीका स्थानीय सरकारले पूर्ण जिम्मेवारी लिएर सुरक्षित वातावरणमा पठनपाठन गराउन सके विद्यालय बन्द गर्न जरुरी नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् । जिल्लाका सिमाना नजिकका पालिकाहरू सम्सी, जलेश्वर, मट्टीहानीजस्ता पालिकाहरूमा जोखिमका हिसाबले संवेदनशील भए पनि अन्य पालिकामा त्यति धेरै जोखिम नभएको स्थानीय सरकारहरूको दाबी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयवाट १५ माघसम्म पठनपाठन बन्द गर्नै पर्ने निर्देशन जारी भए […]
गुल्मीको मुसिकोटका २० वर्षिय हिमाल कुँवरको कारुणिक अवस्था (भिडियो सहित)
January 19, 2022 खबर समृद्धLeaveaComment on गुल्मीको मुसिकोटका २० वर्षिय हिमाल कुँवरको कारुणिक अवस्था (भिडियो सहित)
गुल्मीको मुसिकोटका २० वर्षिय हिमाल कुँवरको कारुणिक अवस्था (भिडियो सहित) गुल्मी: गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका-३, खिल्लीका २० वर्षिय हिमाल कुँवर न हिँडडुल गर्न सक्छन्, न बोल्न नै। असाध्य रोगका कारण उनी बिस्तारमा आमाको सहारामा बाँचिरहेछन्। यस्तो अवस्थाका छोराको स्याहारसुसार गर्दै बसिरहेकी आमाको पिडा पनि कम छैन। छोराको उपचार गर्दागर्दै सम्पत्ति सकियो तर उनलाई निको भएन। थप […]
कोभिड-१९ विरुद्धको खोप कार्ड हराएमा यसो गर्नुहोस् सजिलो छ ।
January 19, 2022 खबर समृद्धLeaveaComment on कोभिड-१९ विरुद्धको खोप कार्ड हराएमा यसो गर्नुहोस् सजिलो छ ।
काठमाडौं । सरकारले यही माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिकस्थलमा प्रवेश गर्नका लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ । सरकारले खोप कार्ड अनिवार्य गरेसँगै केही मानिसको खोप लगाएको कार्ड हराएकोले नयाँ प्रतिलिपि बनाउनुपर्ने हुन्छ । पहिले लगाएको खोप कार्डका आधारमा बुस्टर डोज दिइने भएकाले खोप कार्ड अनिवार्य नै चाहिन्छ । त्यसैले अब खोप कार्ड […]